Izazinzulu zeRadar yaseTshayina ezingangenwa ngamanzi i-Ip65 30W 60W 90W 120W Yangaphandle Yonke Kwi-One Solar Led Street Light abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
Izivavanyi zeRadar ezingangenwa ngamanzi i-Ip65 30W 60W 90W 120W yangaphandle yonke kwisibane esinye seSolar Led Street
Isicelo: ROAD, Garden
igama lemveliso: 30W 60W 90W 120W Ngaphandle Konke kwiSolar Led Street Light
ixesha lokusebenza: 13 H
KULULA UKUSEBENZA & UGCINE IMALI: Isibane sesitalato selanga kulula ukuyifaka, kwaye ayifuni amakhonkco ocingo olunzima olongezelelweyo, kwaye inokuxhonywa eludongeni okanye epalini. Ububanzi bentonga yenkxaso ukusuka kwi-1 ukuya kwi-3 intshi. Kwaye igcina iindleko zofakelo kunye neendleko zokuyigcina, amatyala ombane ngokunjalo.
UKUSEBENZA OKUPHAKAMILEYO I-POLYSILICON PANEL ZESOLA: Isibane sesitalato selanga ngaphandle sisebenzisa iiphaneli ze-polycrystalline silicon photovoltaic ezinomgangatho ophezulu wokuguqula umbane. Ukukhanya kwelanga ngaphandle eyakhelwe-ngaphakathi 15000mAh umthamo omkhulu lithium ibhetri, ukuba ihlawulwe ngokupheleleyo kwiiyure nje 4-6, ukubonelela ixesha elide yokusebenza malunga 10-12 iiyure kwimo eqaqambileyo.
IMIBONO EYAKHIWEYO: Izibane zelanga ze-LED zigubungela i-angle eyi-180 °, indawo ye-1610sq.ft. Isivamvo sentshukumo yelanga ukukhanya kwangaphandle jikisa imowudi yokukhanya eyi-100% kwimizuzwana emi-2 xa intshukumo ibonakala. Ibuyela emva kwi-30% yendlela yokonga amandla kwakhona ukuba abantu bangaphandle kwendawo echongiweyo.
IP65 WATERPROOF: Ukukhanya kwesitalato esinikwe amandla ngeSolar IP65 ibakala elingangenwa manzi, imvula, ukhuseleko lombane kunye nothuli, umzimba wesibane seplastiki ye-ABS kunye nendlu entsha yoyilo lwangaphakathi enebhokisi ezitywiniweyo zeebhetri, isilawuli kunye neringi yerabha etywiniweyo yangaphandle ikhusela ekuvuzeni kwamanzi.
QAPHELA: Nceda uvule isibane sesitalato esishukumayo sesolar phambi kokufakwa. Ngaphambi kokusetyenziswa kokuqala, nceda uvule isibane sokukhanya kwesitrato kwaye uhlawule iiyure ezingama-6-8 phantsi kwelanga elithe ngqo.
Ukutshaja okuzenzekelayo ngexesha lasemini kwiiyure ezi-4-6 (ngeLanga)
Ukukhanyisa okuzenzekelayo ebumnyameni kwiiyure eziyi-10-12 (phantsi Ukuchasa ngokupheleleyo)
Uphawu loku-1: Isiqingatha semowudi eqaqambileyo xa izibane zikhanya ebusuku ngenzwa yasebusuku ezenzekelayo
Uphawu 2: Imowudi yokukhanya ngokupheleleyo xa abantu besondela ebusuku
Inqaku lesi-3: Xa abantu bemka, jikela kwi-Dim light ukuze ugcine amandla
Ukutshintsha okuzenzekelayo kwimowudi yerada ngeentsuku ezinethayo
xa ulawulo lokukhanya luvuliwe.Kufuneka lube phantsi kwe-cindition yemini okanye ipleyiti ekhanyisiweyo.Emva kokulawulwa kokukhanya kwemini ivuliwe.Izibane zikhanyisa ngokuzenzekela ebusuku.Ebusuku,Ayinakuvulwa nanini na ukuba itenters ukukhanya. .Imeko elawulwayo.Kucetyiswa ukuba i-boaro ilungiswe emini kuba ayivezwa ekukhanyeni.
Umsebenzi wokulawula kude
1. Imowudi ezenzekelayo
2. Ukulawula ukukhanya okuzenzekelayo ukuvula ebusuku
3. Imodi yokulawula ixesha i-N hpurs emva kokuvula okuzenzekelayo okumnyama
4. Imowudi yokukhanya epheleleyo
5. Imo yokutshintsha isibane esikhanyayo esipheleleyo
6. Ukulungiswa kokukhanya kumnyama kunye neqhosha lokulungelelanisa elikhanyayo
Umzekelo KAI-30 KAI-50 KAI-100 KAI-150
Amandla 30W 50W 90W 120W
Amaso ezibane 20PCS 40PCS 60PCS 80PCS
Ibhetri 5AH 8AH 12AH 15AH
Iphaneli yeSolar 6V/7W 6V/9W 6V/12W 16W
Ukupakisha ubukhulu 610*220*415 730*240*520 660*370*275 755*380*270
Ubungakanani bePaneli yeSolar 302*188 397*212 508*231 608*231
Immimiselo yokuhlawula Ngu, TT, Westerm, Union, njl.
Ngaphambili: Isibane sesitalato sangaphandle seSolar, isibane seLoti yokuPaka iSolar Powered Lot eneMotion Sensor 6000K, ngorhatya ukuya kuthi qheke ukusa, Tshintshela ixesha
Okulandelayo: 30-120W IP65 Ubukrelekrele obuDityanisiweyo kuyo yonke iSolar Led Street Light ngaphandle 90W UkuKhanya kweSolar Street Light
Elona xabiso litshiphu leGadi yeNdlela yaKhaya ye-IP65 yeRadar ...
Iwaranti yeminyaka emi-5 ubude obungangeni manzi ngaphandle kunye ...